/blog/gallery/Kedu ka Flibanserin si enyere nwanyị aka dị ka Mmekọahụ Mmekọahụ
Ihe na 11 / 11 / 2019 by 阿斯劳 dere na gallery.
Ma, ajụjụ bụ isi; kedu ka o si arụ ọrụ? Enwebeghị nchọpụta doro anya gbasara usoro ọgwụ a si arụpụta nsonaazụ. N’agbanyeghi, ndi nyocha achoputara ihe omuma, na-agbaso na eziokwu a bu nke serotonin maka igbochi oru mmekorita nwoke na nwanyi, ha ahutawo na Flibanserin (167933-07-5) na-ebelata ọrụ serotonin na ụbụrụ. Nke a, na nloghachi, weghachi nwanyị nwere agụụ mmekọahụ. Ọzọkwa, ọgwụ ahụ nwere mmetụta na-apụtachaghị ìhè na norepinephrine na dopamine, bụ nke jikọtara na agụụ mmekọahụ ka mma.
Ọ bụrụ na uche gị Flibanserin usoro onunu ogwu n'oge ihi ụra, odi nma ka ichere rue oge ozo nke ozo iji nye ogwu.
Dabere na ọtụtụ ọmụmụ na nyocha hoc, postmenopausal na ụmụ nwanyị premenopausal nke jiri ọgwụ a maka hypoactive Mmekọahụ Ọrịa aghara nwere ike idalata. Ka anyị chee ya ihu. Ọtụtụ ụmụ nwanyị maara banyere ibu ha ma na-atụ egwu iji ihe ọ bụla ga - emetụta ibu ha. Ọ bụ mmetụta na-emesighachi obi ike ịmara na iji FLIBASERIN enweghị mmetụta ọ bụla na-erite uru na ụmụ mmadụ, kama, ọ na-enyere ha aka ịkwụsị ibu dị oke mkpa. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na nsogbu nsogbu ma na-achọ ụzọ na-enweghị isi iji tufuo ya, ọgwụ a gbakwunyere.
Amazon Digital Services LLC - Kdp Bipute Anyị, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): Akwụkwọ Ntuziaka na Mmekọahụ Mmekọ Nwanyi Na-eme Ka Mmekọahụ nwee Mmekọahụ ma Na-enyere Womenmụ nwanyị Aka Iru Orgasm Ọtụtụ, 1729471161
Borsini F, Evans K, Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002). "Nkà ọgwụ nke flibanserin". Nyocha banyere CNS. 8 (2): 117–42.
Ihe ọ bụla gbasara Oxandrolone (Anavar), ịkwesịrị ịma Kedu otu Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) si arụ ọrụ maka ndị na-ahụ maka ahụ